म्यान अफ द वल्र्डमा स्पेशल अवार्ड - एवार्ड - साप्ताहिक
म्यान अफ द वल्र्डमा स्पेशल अवार्ड
म्यान अफ द वल्र्ड–२०१७ मा नेपालका तर्फबाट सहभागी डा. राम चन्दलाई स्पेशल अवार्ड अन्तर्गत च्यारिटी एण्ड पब्लिक सर्भिस अवार्ड प्राप्त भएको छ ।
मास्कुलिनिटी विथ रेस्पोन्सिबिलिटी अर्थात् जिम्मेवारी सहितको सुगठित शरीरको नारासहित जुलाई २८ मा फिलिपिन्सको पसाए सहरमा सञ्चालित उक्त प्रतियोगिताको फाइनल प्रतिस्पर्धामा डा. चन्दले विश्वभरिका दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सहभागीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
चन्द यो प्रतियोगिताको वेष्ट इन फर्मल वेयर विधातर्फ टप टेनभित्र पनि पर्न सफल भएका थिए । म्यान अफ द वल्र्ड–२०१७ को शीर्ष उपाधि भने इजिप्टका मुस्ताफा गलाल मोहम्मद एलिजालीले जिते ।
नर्सिङ आइडल सुनिशा
म्यूजिक भिडियो अवार्ड मलेसियामा वैशाख ७, २०७५
रापती म्युजिक एवार्ड वैशाख ६, २०७५
लोकप्रिय जोडी प्रदीप र साम्राज्ञी चैत्र १८, २०७४
फान एवार्डको मनोनयन चैत्र ९, २०७४
नेपाल म्युजिक एवार्डको मनोनयन चैत्र ५, २०७४
यस्तो रह्यो रेडियो कान्तिपुरको नेशनल म्युजिक एवार्ड माघ २८, २०७४
सुन्दरादेबी म्युजिक अवार्ड माघ १७, २०७४
कामना एवार्डमा छक्कापञ्जा हाबी माघ १७, २०७४